खानेपानी मन्त्री बिना मगर बेपत्ता ! – Everest Pati
खानेपानी मन्त्री बिना मगर बेपत्ता !
काठमाडौं – बहालवाला खानेपानी मन्त्री बिना मगरको नाम बेपत्ताको सूचिमा भेटिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचीमा मगरको नाम भेटिएको हो ।
बेपत्ता छानबिन आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीको १९० नम्बरमा बिना मगरको नाम समावेश छ। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक जानकारी लिनका लागि द्वन्द्वकालीन अवस्थामा बेपत्ता पारिएका २ हजार ५०६ व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको छ। जसमा बहालवाला मन्त्री मगरको नाम समेत समावेश छ।
आयोगका सूचना अधिकारी निराजन घिमिरेले हाल सम्पर्कमा आएका भएपनि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका सबैको नाम सूचीमा समावेश भएको बताए। ‘उहाँको नाम आंशिक बेपत्तामा समावेश हुनसक्छ, उहाँले आफैं उजुरी दिएको होला,’ घिमिरेले भने, ‘उहाँसँग बयान लिएर कुन किसिमको राहत दिने, उजुरीलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने निर्णय भएपछि बेपत्ताको सूचीबाट हटाइन्छ। अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ।’
आयोगको सूची अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी बर्दियाबाट परेका छन्, जहाँ २५४ जना बेपत्ता भएको सूचीमा उल्लेख छ । दाङमा १२८, कञ्चनपुरबाट ७७, अछामबाट ५४, चितवनबाट ५१, गोरखा र नुवाकोटबाट ४०–४० जना बेपत्ता भएको उजुरी परेको छ।
आंचल लेख्छिन्, ‘अरु जस्तै विवाहको सपना बुन्ने केटीले भर्खरै आफ्नो राजकुमार पाएकी छिन्’